Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, November 30, 20082: Comments
कति-कति बात मार्दा अनि बल्ल कुरा मिल्यो
नियत यो नबिगार्दा अनि बल्ल कुरा मिल्यो ।
जूनैजून उडाउने रहरले दुःख दियो,
यथार्थमा सबै झार्दा अनि बल्ल कुरा मिल्यो ।
झ्याङ्गिएर खुला जरा अर्को जुनी नजेलिँदै,
गमलामा फूल सार्दा अनि बल्ल कुरा मिल्यो ।
दुई किनार भै घुर्क्याउँदा तड्पिनु त पर्‍यो अलि,
आफूलाई पारी तार्दा अनि बल्ल कुरा मिल्यो ।
सानोतिनो कुरुक्षेत्र त्यसै कतै जागे पनि,
सँगै जित्दा सँगै हार्दा अनि बल्ल कुरा मिल्यो ।
मार्च २६, २००८ (बुधबार) नक्साल, काठमाडौँ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, November 29, 20084: Comments
रङ्गमञ्चको उत्थानमा सम्वत् २०३८ वसन्तपञ्चमीदेखि क्रियाशील नाट्यसंस्था आरोहणले साधना केन्द्रका रुपमा गुरुकुलको स्थापना गरेयता नेपाली रङ्गकर्म जुर्मुराएको मात्र छैन, यस जुर्मुराइलाई बिस्तारै-बिस्तारै गर्दै आज आम जनसाधारण कलाप्रेमीहरूको साथ पनि मिलेको छ । यति चाख जगाउनमा आरोहणको निरन्तरको लगन र प्रयोगशील यात्राले काम गरेको छ । राज्यको प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रबाटै हुनुले नेपाली रङ्गमञ्चको 'कुरीकुरी' त सबल रुपमा थामिएकै छ, कलाकर्मीहरूले पनि उर्लिएको आफ्नो कलाचेतको चाह मेट्दै त्यसैबाट जीविकोपार्जनको मेसो समेत मिलाउन सकेका छन् ।
हरेक दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव आयोजना गर्ने सोचअनुरुप २००६ देखि जुटेको आरोहण-गुरुकुलले यसपाली पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो । कलाको निश्‍चित सीमा र भाषाको छेकबार हुँदैन भन्ने पक्षलाई यस्ता महोत्सवले थप रोगन थप्छन् । नोभेम्भर ११ देखि २७ तारिखसम्म भएको 'काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव - २००८' मा नेपालका ४ वटा गरी जम्मा १७ नाटक मञ्चनमा उत्रिए । तिनमा बेलायत, बङ्गलादेश, भारत, अमेरिका, नर्वे, डेनमार्क, थाइल्यान्ड आदि देशहरूको प्रस्तुति रहृयो ।
पहिलो दिन अभि सुवेदीलिखित 'आरुका फूलका सपना' मञ्चनबाट महोत्सवको थालनी गरिएको थियो । महोत्सवमा नर्वेको 'हङ्ग्री टाइगर्स', नेपालको 'कर्णाली दक्खिन बग्दो छ', भारतको 'नटी विनोदिनी' दर्शकमाझ छाप छाड्ने हिसाबमा विशेष उल्लेख्य रहे । भारतीय नाटक 'नटी विनोदिनी' साँझ ५ बजे देखाइए पनि अन्य सबै नाटक मध्यान्ह १२ बजे र साँझ ५ बजे गरी दिनको दुई पटक प्रदर्शन गरिएको थियो । 'नटी विनोदिनी' राजधानीको जमलस्थित सांस्कृतिक संस्थानको नाचघरमा देखाइएबाहेक सबै नाटकहरू गुरुकुलको रिमाल नाटकघरमा मञ्चन गरिएको थियो । गत २००६ मा आरोहणले इब्सेन नाटक महोत्सव गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको ढोका खोलेको हो ।
CaFe को परिकारमा यसपाली, महोत्सव - २००८ मा प्रस्तुत गरिएकामध्ये एउटा नाटकको चर्चालाई पस्किइएको छ । महोत्सवमा प्रस्तुत भारतका ५ नाटकमध्ये मञ्चनमा पछिल्लो क्रम(१९ तारिख)मा उत्रिएको पौने २ घन्टा अवधिको नाटक थियो 'नटी विनोदिनी' । संस्कृत मूल (तत्सम) बाट आएको 'नट' शब्दबाट बनेको 'नटी'को अर्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा यसरी खुलाइएको छ – 'नाच्ने पेसा भएकी स्त्री, नाटक आदिमा नृत्य वा अभिनय गर्ने स्त्री पात्र; नर्तकी, नटुवी ।
'रङ्गमञ्चमा जीवन अर्पण गर्ने एक नारी चरित्रको अलग पाटोलाई उतारिएको त्यही नाटक 'नटी विनोदिनी' बारे दर्शकको आँखाबाट गरिएको समीक्षात्मक चर्चा यहाँ प्रस्तुत छ ।
नटी विनोदिनीमा सत्यको बोल
गंगा नदीको पानीमा मुजा परेको आफ्नो अनुहार, धमिलिँदै गएका आँखा, अनि बुढ्यौलीले रुग्ण शरीर हेदै मनमनै खुसी भएकी एउटी वृद्धाको अनुहारमा झल्किएको भाव पढ्दा लाग्छ, सौन्दर्यको पारख गर्ने आँखाबाट अब उनी मुक्त भएकी छन् । त्यसैले करिब १५ सय मानिसहरूले घेरिएको मञ्चमा उनले चिच्याउँदै आफ्ना खुसी व्यक्त गरिन्- 'अब मलाई स्वतन्त्र भएर मन लागेको काम गर्न रोक्ने मेरो रुप मसँग छैन ।'
'काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव - २००८' मा भारतको प्रस्तुति नटी विनोदिनी नाटकमा विनोदिनीको शीर्ष चरित्रलाई सलिमा रजाले जीवन्त बनाइन् । प्रख्यात भारतीय रङ्गकर्मी विनोदिनीको जीवनचरित्रलाई बुनिएको नाटकलाई थियटर अफ टेलिभिजन एसोसिएटस् न्यू दिल्लीका कलाकारहरूले साकार रुप दिए । देश-विदेशमा डेढ सयभन्दा धेरै पटक देखाइसकिएको नाटक हजारौँ दर्शकको वाहवाही लुटेर नेपाली आँगनमा बल्ल झुल्किएको थियो, नाटक महोत्सवको साइत पारेर । स्वैरकल्पना शैलीमा प्रस्तुत भएको नाटकमा प्रख्यात भारतीय रङ्गकर्मी विनोदिनीका रङ्गमञ्चभन्दा बाहिरका कुरालाई निर्देशक अमल अल्लानाले समेटेकी छन् । सामाजिक जञ्जालमा केटीमानिसले अरुको इच्छा पूरा गर्न कसरी आफ्ना इच्छा र रहरलाई तिलाञ्जलि दिनुपर्छ, उनीहरूको इच्छाको कसरी आफ्नै मान्छेबाट गला दबाइन्छ र सामाजिक अन्यायको सिकार बनाइन्छ भन्ने पीडाको सिलसिलेवार कथा हो - नटी विनोदिनी ।
विज्ञानका अनुसार, जब मानिस अत्यन्त खुसीमा या अत्यन्त दुःखमा हुन्छ, तब चेतन मनले काम गरिरहेको हुन्छ । त्यो बेलामा दिमागलाई जुन कुराले निर्देशित गर्छ, त्यो कुरालाई संसारको कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन । अप्रत्यासित आइपरेको दुःख, पीडा सम्हाल्न नसकेर धेरै मानिस बौलाउँछन् । कतिले त्यही पीडाबाट मुक्तिको बाटो भेटाउँछन् । विज्ञानले भनेको यही कुरा नाटक नटी विनोदिनीले पनि पुष्टि गर्न खोजेको छ । विनोदिनीको जीवनमा पनि धेरै दुःख आइपर्छन् । तर उनले त्यो दुःखलाई शक्तिमा परिणत गरेर जीवनलाई मुक्तिको बाटोतिर लैजान्छिन् ।
पैसा कमाउन गंगाबाई हुँदै बङ्गालका प्रसिद्ध नाटक-निर्देशक गिरिष घोससम्म पुगेकी विनोदिनीले विद्धान् लेखकहरूले लेखेका नाटकका पात्रमा डुब्दै अभिनय गर्दा जीवन-जगत्‌का सिद्धान्तलाई बुझ्न थाल्छिन् । सहरीबाबुबाट धोका पाएकी विनोदिनीले पहिलोपटक संसारिक जीवनको बारेमा बोध गर्छिन् । यसैगरी, जीवनमा आइपर्ने क्रमिक दुःखसँगै कसैबाट आशा राख्‍नुहुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछिन् । निष्काम कर्मले नै मानिसलाई सफल बनाउँछ भन्ने कुराको बोध हुन्छ । त्यसैले सहरीबाबुहरूको दुनियाँलाई चटक्क छाडेर उनी पूर्ण रुपमा नाटकमा समर्पित हुन्छिन् ।
तर गुरुले धनी मान्छेकोमा आफ्नो शरीर बेचेर नाटकघर बनाउन पैसा कमाउन पठाउने कुराले उनको मनमा दोस्रो पटक चोट लगाउँछ । दोस्रो चोटबाट उनले अनित्य जीवनमा इच्छाको कुनै मोल हुँदैन, जस्तो-जस्तो पर्दैजान्छ, त्यसलाई कर्ताको रुपमा नाटकको पात्र बनेर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछिन् । तर पनि आशाको दियो अझै उनको मनबाट निभ्दैन । त्यसैले 'विनोद नाटकघर' बनाउने सपनाले उनलाई उत्प्रेरित पारिरहन्छ । तर, नाटकघरको नाम अर्कै राखिन्छ- 'स्टार नाटकघर' । यो उनको जीवनमा परेको तेस्रो ठूलो चोट । तेस्रो चोटले भने उनमा ठूलै परिवर्तन ल्याइदिन्छ । उनको मनमा रहेको आशा र लोभ पनि हटेर जान्छ ।
कुनै कुरा हुनु र नहुनुले उनको जीवनमा कुनै पनि अर्थ राख्‍न छाड्छ । तर पनि गूरुको आज्ञा पालना गर्दै जीवनका अनुभव लेखिरहेकी हुन्छिन् । सबैले देखेको, सुनेको भन्दा भिन्न जीवनका बारेमा, तब आफूले सोचेको भन्दा भिन्न कुरा लेखेकोमा गुरु गिरिष घोषले आत्मकथामा भूमिका पनि लेखिदिँदैनन् । तर यता विनोदिनी भने मुजैमुजा परेर चाउरिएको शरीरप्रति मोहित हुँदै भनिरहेकी हुन्छिन् - 'अब मलाई स्वतन्त्र भएर मन लागेको काम गर्न रोक्ने मेरो रुप मसँग छैन ।' विनोदिनीले जीवनकै सबैभन्दा ठूलो कुरा पाइसकेकी हुन्छिन् । उनका गुरुले धेरै पटक दोहोर्‍याउने वाक्य । कलाको माध्यमबाट उनले जीवनमा मोक्ष पाइसकेकी हुन्छिन् ।
नाटकले मानिसलाई बौद्धिक बनाउँछ, जीवनका अनेक आयामको बारेमा ज्ञान दिन्छ । यस नाटकको कथावस्तु मात्र होइन, प्रस्तुतिले पनि नाटकलाई निकै असरदार बनाएको छ । प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पृष्ठभूमिमा देखाइएको दृश्यले कथा-प्रस्तुतिलाई झन् प्रष्ट र रोमाञ्चक बनाएको छ । प्रोजेक्टरबाट आएको दृश्यलाई रङ्गमञ्चका कलाकारले नछेकून् भन्नकालागि मञ्चमाथि शीशाको प्रयोग र शीशाभित्रबाट गरिएको प्रकाश संयोजनले पृष्ठभूमिको दृश्यलाई कुनै असर पारेको देखिएन । नाट्यक्षेत्रमा भएको नयाँ प्रविधिको विकासलाई नाटक हेर्न भेला भएका झन्डै १५ सयजति नेपाली र विदेशी दर्शकले निकै रोचकतासाथ ध्यान दिएर हेरिरहेका थिए । मुख्य पात्रलाई देखाउन प्रयोग गरिएका अन्य पाँच कलाकारले विनोदिनीका धेरै इच्छा, आकांक्षा, अन्तर्मनको द्वन्द्व, विचार आदिलाई सजिलैसँग प्रस्तुत गरे । यसका साथै नाटकको मागअनुसार प्रयोग भएका गीत-सङ्गीतले बीचबीचमा मनोरञ्जन दिइरहेको थियो ।
भारतीय रङ्गकर्मीको आत्मकथा भए पनि यो नाटकले प्रत्येक मान्छेका मनोभावनालाई छोएको छ । कुनै न कुनै रुपमा प्रत्येक व्यक्तिको कथासँग विनोदिनीको कथा मिल्छ । नाटकका विभिन्न पाटोले विभिन्न सन्देश र यथार्थलाई चित्रण गर्न खोजेको भए पनि मूल उद्देश्य भने एउटै छ, त्यो हो - आफूले भोगेका विभिन्न कुरा नाटक मात्र हो, यथार्थ होइन । जीवनको अन्तिम सत्य भनेको मोक्ष प्राप्ति हो । आफूमा भएको क्षमतालाई चिनेर त्यसैमा रमाउन सक्नु नै जीवनको अन्तिम सत्य हो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, November 27, 20086: Comments
अनुहारको सुक्खा पोखरीमा
आत्महत्या गरिसकेजस्तो छ-
पानी-पानी भए कि भन्छु-
पिठोझैँ बुङ्बुङ्ती रहरहरू
चिचिला लाग्दै गरेका
निभ्दै छन् टेबलमाथिको उर्वर एस्ट्रेमा
यस्तो छु म यस्तो-
छुटेपछि तिम्रो स्टेशनबाट ।
मायादेवीको ममताले बतासिएर
आएथ्यो तिम्रो मनको खोपबाट
मछेउ भुरुरु सारस चरो,
हस्ताक्षर गरेथ्यो नरम प्वाँखहरूले
मेरै आत्माको बहीखातामा
चटक्क तानिदिएको गहुँगोरो धर्सो टीका
निधारभरि सूर्य बनाएर
जसरी दुर्बल कोपिला छुट्छ हाँगाबाट
उसैगरी त हो म खुस्किएको-
जीवनजस्तै न्याना तिम्रा जोर्नीहरूबाट
कतिविघ्न ढुसीदार पातालमा पो
पुग्ने हुँ म
तिमीले उपहार दिएको
जिन्दगीभरको एउटै यो एउटै चश्मा - आँसुको
नयाँ प्रेमको कथा बगाइरहेछु ।
साउन २३, २०६५ नक्साल ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, November 18, 20084: Comments
दसैँको उल्लासमय व्यस्तताबीच जिल्लाको अप्राविधिक छटपटीमा दसैँको कुरा-कन्था शब्दमा उतारेर बाँडीचुँडी गर्न यसपाली त्यत्तिकै रहृयो । CaFe ब्लगलाई आफ्नो पूजा-कक्ष सम्झिएर अक्षरको आराधना गर्दै आएको थिएँ, यो पनि गत एक महिनाभन्दा बढीको अवधिमा मेरो शिथिलतासँगै शून्य भएर रहृयो । यो पूजा-कक्षमा न त साँझबत्ती, न त धूप-बात्ती । देवी-देउता नै उधुमसित रिसाए कि ? थाहा छैन । मेरा प्यारा पाठक तथा ब्लगर मित्रहरू...।
शून्यता र वियोगको चस्कासँगै २०६५ सालको मध्यतिर यस्तै घाउमा म दुखेर बसेँ । अब त्यही घाउ सेलाउने मेसोमा दसैँ-सन्दर्भ खोतल्दै छु यतिखेर । हिन्दू संस्कारमा चार दिशातिर छरिएका आफन्तजनलाई एकै टुङ्गोमा भेटाउने दसैँ जस्तो चाड वर्षदनमा एकचोटि मनाएर पनि अर्को दसैँ-तिथि नआउँदासम्म त्यसैको स्मृतिमा डुबिबस्ने बहाना हामीलाई सदा मिलिरहेकै हुन्छ । यो सन्दर्भको उठानलाई त्यस्तै एउटा बहाना सम्झिदिनुहोला ।
जमरे दसैँ, चिउरे दसैँ
घटस्थापनामा गहुँ, जौ, तिल, मकै आदिको जमरा राखेर सुरु हुने दसैँमा पशुहरू पुज्य र भोज्य जिनिस बन्छन् । फलस्वरुप भोजमा च्युराको आवश्यक्ता पनि देखिइहाल्छ । चौदिशाका आफन्तजन एकै ठाउँमा जुटेर सद्भाव कायम राख्ने यो सांस्कृतिक अवसर रमाइलो गर्ने नाममा जिभ्रो फडकार्ने स्वा दिलो खानपिनभित्र पशुबलिको तडकभडकतिर रुमलिन्छ । फलस्वरुप पूजाकोठामा चन्दन-धूपसहित एकाध घन्टा गुजार्ने 'धर्मालुहरू' पनि दसैँको बहानामा लालसायुक्त मुख खोल्छन्-'परम्परा भइआएको कुरो, चलाउनैपर्‍यो नि !' अनि त आँगनबीचमा माटो र गोबरको चोखो घेरोमा केराको दाम्चा तेर्स्याइएर खसी-बोका काटिन्छन् । दसैँकै मौकामा राँगा, सुङ्गुर, कुखुरा लगायतका कैयन् पशु-पन्छीले मानवउत्सवका निम्ति जीवनाहूति दिन्छन् ।
दसैँमा जस्तोसुकै वैष्णवी घरमा समेत मासुको विविध परिकार शोभा बन्ने गर्छ । आफू नखाने भए पनि आउने टीकारी पाहुनापासा तथा आफन्तका लागि मासुको जोरजाम गरिन्छ । जमरा राखेर सुरु हुने दसैँ पूणिर्मासम्म टीका लगाउन आइपुग्ने पाहुनाजनको लागि तुन्द्रङ्ग सिकमा वा फ्रिजमा साँचेर राखेको मासुको बचेखुचेको लेदोसँग च्युरा मोलेर-खाएर समापन हुन्छ । कानमा जमरा सिउरिएर प्लेट-थाल वा टपरीभरि च्युरा लिँदै चोक्टा थाप्ने लहरमा नबसी हामीलाई चित्तै बुझ्दैन । यस्तो हाम्रो जमरे दसैँ, च्युरे दसैँ !
सबैजसो घरको दसैँमा काटीकुटी यस्तै रुपरङ नहोला । तर नेपाली घरदैलोमा जमरा र च्युरायुक्त दसैँ नै रोज्जा र परम्परित कुरा हो ।
एउटा टुक्का छ- फलामको च्युरा चपाउनु । टुक्काको च्युरामा फलाम जडिए पनि मान्छेले च्युरा त खान छाड्दैन । पोषणको कुरा गर्दा कार्बोहाइड्रेटको प्रचुर खानी च्युरा साकाहारी, मांसाहारी सबैले उत्तिकै रुचाउने र झट्ट झिकेर खान सकिने सजिलो परिकार हो । भुजिया-मिठाइ वा दहीसँग च्युरा, माछा-मासुसँग च्युरा । घरायसी रुपमा घिउसँग पर्परी भुटेर खान मिल्ने च्युरा, भोजभतेरमा छुस्स एक-एक मुठी सामुहिक रुपमा खुवाउन सकिने च्युरा ।
गाउँघरमा घरैपिच्छे खाजा र कहिलेकाहीँ त खानाकै ठाउँ लिने खुराक हो च्युरा । सहरबजारमा विशेषतः व्यावसायिक प्रयोजनमा च्युराले म हत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गर्छ । होटलदेखि किराना पसलसम्म । सरकारले पनि यसैलाई राष्ट्रिय खान्कीको मान्यता दिएझैँ लाग्छ, त्यही नीति अख्तियार गरेर होला बाढी-पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले जनता आहत भए कि त पोकामा चाउचाउको प्याकेटसँगै च्युरा पठाइहाल्छ । अनि त गुमेको थातथलो सम्झिँदै मर्‍याङमर्‍याङ च्युरा चपाउनु ती नागरिकहरूको लागि दैनिकजसो 'आनन्ददायक खेल' बन्न जान्छ ।
गाउँघरमा दसैँको विशेष च्युराको लागि नयाँ धानको जोरजाम गर्ने चासो नवरात्रिअघि नै सुरु भइसक्छ । नवरात्रिसम्ममा त सुकाइ-भिजाइ-उसिनिएको धान चिउरा-मिलमा चाङ लागिसक्छ । अनि त पालो पर्खिँदाको सास्ती । यसपाली दसैँमा उदयपुरस्थित घर पुग्दा च्युराको किस्सा राम्रैसँग नियाल्न पाएँ । च्युरा कुटाउन मिलमा मान्छे र बोराहरूको लाइनदेखि 'भोलिसम्ममा च्युरा कुटाएनौ भने राम्रो हुँदैन' भनेर मिल मालिकलाई ग्राहकबाट आएको धम्की ! मानौँ ती ग्राहक-मनुखेहरू ठूलै दबाबमूलक क्रान्ति छेडेर आम रुपान्तरण गर्न कस्सिएका हक्की आन्दोलनकारी हुन् । देशमा गणतन्त्र आएको भन्या यही हो कि जस्तो लागेर दङ्ग परियो । बिजुलीबाट सञ्चालित मिल लोडसेडिङको बेला सुस्ताएर अहोरात्र जुट्दा पनि अपजसको भागीदार थियो । मिल व्यवसाय गरेकोमा र त्यत्तिका ग्राहकहरूको थाम्नै नसकिने ओइरो लागेकोमा बिचरा मिल-मालिकले हर्षमाने या विस्मात् ! अरुबेला झिङ्गा मारेर बस्नुपर्ने च्युरा-मिलमा वर्षदिनको दसै-तिहारमा थुप्रिएका बोराका पोकाहरूबीचमा मिल स्थापनादेखि भर्खर पहिलो चाड झेल्नपुगेका मालिक आपतमा देखिन्थे ।
चिउराको लागि नयाँ धान आफूसँग नभए वा नपाके पनि पछि आफ्नो खेतबाट धान भरेर फिर्ता गर्नेगरी चिनाजाना छिमेकीसँग ५ पाथी-१० पाथी पैँचो धान लग्ने किसानको लस्कर पनि यसपाली देखेँ मैले । (हेर्नुस् तस्बिरमा एउटा नमूना ।)
जति-जति उमेर पाक्यो, चाडबाडको उल्लास पहिलेजस्तो नहुने कुरा वर्षौपिच्छे झन्-झन् नमीठो गरी अनुभव हुँदोरहेछ । पहिले दाजु-दिदीहरूले भन्थे, अहिले आफैँ अनुभव गर्दै छु । छिप्पट आँखाले हेरेमा चञ्चलताको अंश कतै बाँकी नरहेजस्तो । यो निराशाको कुरो होइन, अलि दिक्कलाग्दो अनुभूति मात्र हो । घरै टेक्न पुगे पनि जसलाई यसपाली पनि मैले भोगेँ । झन् घरदेखि टाढा, अझ परदेशको भूमिमा बसेका दाजुदिदी तथा भाइबहिनी लगायतका मित्रवरले कति तीतो भोग्नुभयो होला । बालापनको रमाइलो साथमा नरहे पनि ढल्दो उमेरको उकाली पलहरूमा पनि घरमै हुँदाको जस्तो मिठास त बाहिरतिर कतै पनि हुन्न । झन् पोहोर-परार जुगको कुरा सम्झिँदै चाडपर्वमा भक्कानिनु त वर्षैपिच्छेको रीत हुन्छ परदेशतिर । बहराइनमा रहेको मेरो भाइ (फूपुको छोरा, जसको गायन-सपनाबारे अलि पछि छुट्टै पोष्ट लेख्‍नेछु ।) को फोन दसैँ-तिहारमा झन् बाक्लो हुन थाल्छ । उसको व्याकुलता त्यहीबाट बुझ्छु म ।
माइतीलाई 'बिदा है' भन्दै घरमा आइसकेर सासू-ससूराको खटनपटन र जिम्मेवारीमा बाँधिएर बस्नुपरेकी बुहारीलाई दसैँ कस्तो लाग्दो हो ? बुहारीको दसैँ-तिहार कस्तो हुन्छ ? यो परिदृश्यलाई पनि उदयपुरका जीवित पात्रहरूबाटै सप्रसङ्ग व्याख्या गर्छु है त !
यो एउटा उदयपुरको मात्रै धमिलिएको रुपरेखा होइन होला । विश्वमै नारी जातिलाई कमजोर रुपमा चित्रित गर्ने परिपाटी रहिआएकोमा नेपालका थुप्रै ठाउँमा छोरी-बुहारीहरूले उही एकनासको पीडापूर्ण दैनिकीमा रुमलिनुपर्ने घटना नौलो होइन । अरु त अरु, चाडपर्वको मौसमी बालीमा पनि छोरी-बुहारीको भागमा खुसी हात पर्दैन । उदयपुरको ऐनामा चियाउँदा बुहारीको दसैँ ट्वाक्कै बुहारीजस्तै देखेँ मैले । भन्नाले अलि घुम्टो ओढेर छोपिएको जस्तो, ध्वाँसो र माटो पोतिएर कत्लैकत्ला भएको जस्तो, सिउनी उध्रिएर कुनाकानीबाट लज्जा चुहिएको जस्तो, हिँड्दाहिँड्दैको पाइला ठाउँका ठाउँ चिप्लिरहेजस्तो, शोभायमान सिउँदोको चेपोमा निस्सासिएको सिन्दूर पसिनामा पग्लिएर अपहत्ते गर्न लागेजस्तो... ।
छिमेककै पल्लो घरमा एउटी भाउजू हुनुहुन्थ्यो, अर्को घरमा काकी हुनुहुन्थ्यो । रगतको नाता नभए पनि गाउँघरमा आत्मीयता, ऐचोपैँचोको सौहार्दता र नाता लगाएर बोल्ने आफन्तीपना कति हुन्छ, बताउनु नपर्ला । ती भाउजू र काकीसँग पनि पारिवारिक रुपमा हाम्रो त्यस्तै आत्मीय सम्बन्ध छ । अरुबेला पकाइतुल्याइ गर्ने बुहारीहरू पाहुनापासाको भीड लाग्ने दसैँमा नैतिकताले गर्दा पनि पन्छिने र फुत्किन पाउने कुरै थिएन । व्यवहारमा बाँधिएपछि सवाल आफ्नो एउटा ज्यानलाई कुनामा सम्हालेर राखेजस्तो त हुँदैन । लालाबाला सम्हाल्नुपर्‍यो, घरका ठूलाहरूलाई पनि रेखदेख गर्नुपर्‍यो, बाहिरकालाई रिझाउनुपर्‍यो । नत्र अलिकति कुनै कुरामा पेच खुस्कियो कि त फलानोकी स्वास्नी र फलानाकी बुहारी त के सारो बेसोमती भनेर अफवाह फैलिने डर !
यसैले पनि गाउँघरतिर व्यक्तिगत रहर र आकांक्षा एकातिर छेउ लगाएर, आरामविराम नभनी जुटिरहनुपर्ने 'निको बेहोरा' बुहारीहरूले साबित गर्नुपर्छ । काका कमाउन विदेश गएपछि भएकी एउटी सासू र दुई छोरीको हेरविचारसँगै भान्सा र गाईबस्तुको बोझ काकीले उठाएको देख्थेँ । दसैँमा माइती जाउँला भनी कति रहर पालेकी थिइन् होला काकीले । तर कता हो, दसैँकै मुखमा माइतीतिरका आफन्त खसेपछि त्यो बाटो बन्द भएर घरमै अल्झिनुपर्‍यो तिनले । भाउजूको कुरा पनि त्यस्तै । तिहारमा रोटी, पकवान सबै ठीकठाक पारी बल्ल उनी भाइटीकाको अघिल्लो दिन साँझपख घरबाट माइततिर फुत्किन पाइन् । ती भाउजूले 'आऽऽ होस् है जान्नँ यसपाली माइत' भनेको भए सासू आमैले कहाँ भन्थिन् होला र 'आबुई के भनेकी दुलही तिम्ले, वर्षदिनको चाडमा नगएर हुन्छ माइत ? जानुपर्छ बा जाऊ ।' ती सासू मात्र होइन, अधिकांश सासूहरूको इच्छा आफ्नी छोरी माइतीघर आओस्, अलि दिन बसोस् भन्ने हुन्छ । तर बुहारी चाहिँ चाडपर्वको धपेडीमा सेवाटहल गर्न घरमै बसिरहोस् भनेजस्तो गर्छन् उनीहरू । त्यस्ता सासूहरू बिर्सिन्छन्, आफ्नी छोरीको घरमा पनि सासू छिन् । छोरीकी ती सासूले पनि आफूले बुहारीलाई गर्ने जस्तो सोच राखिन् र व्यवहार गरिन् भने ???
नोभेम्बर २७, २००८
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, November 17, 20082: Comments
"नाम मात्र उदयपुर हो यसको, यसलाई त खासमा अस्तपुर भन्नुपर्ने ! कहिल्यै नउदाउने गरी अस्ताइसकेको छ यो ", जिल्लामा साथीभाइको जमघट भयो कि त कुनै न कुनै सन्दर्भमा गाँसिएर यस्तै निराशाजनक टीका-टिप्पणी चल्थ्यो । कहिले एउटाको मुखबाट कहिले अर्कोको । मेरो तालुमा पनि यस्तो निराशाको जुरो पलाउँथ्यो ।
पूर्वी नेपालको एउटा जिल्ला आञ्चलिक 'ट्याग'मा सगरमाथाको निधार टाँस्दै सगरमाथाकै काखमा रहेको भए पनि गर्विलो उँचाइ बिना जिल्लावासीहरूकै मनभित्र पिल्लिएर दुख्‍ने गर्थ्यो । खासगरी हामी युवाहरूको मन । जिल्लामा केही सिर्जनशील गतिविधि सुरू गर्थ्यौँ, खोइ केले बिथोल्थ्यो- बिथोल्थ्यो । सामुहिक अभियान पनि केही समय गुज्रनासाथै ओथारो बसिहाल्थ्यो । समूहको आडबाट 'स्वयम्-सेवा' को लक्ष्यसहित ठूलै भाग खोज्ने अभियानकर्ता साथी नै उल्झनका अजस्र स्रोत बन्थे । अनि त भित्तामा अडेसा लागेर खुइय्य काढ्नुसिवाय बाटो हुँदैनथ्यो । एउटा विचित्र प्रसङ्ग, त्यसरी खुइय्य काढ्नलाई भने कसैले बिथोल्दैनथ्यो । तब मगजमा उपयुक्त जच्ने गर्थ्यो अस्तपुरको चिनारी । खासगरी, फेरिएको यो नमीठो नाम साहित्यिक-सांस्कृतिक लगायतका ज्ञानगुनको पाटोमा उदयपुरको चलखेल शून्यप्राय: रहेको र दुई-चार जना मिलेर केही गरौँ न त भन्दा पनि कसरी-कसरी भाँडिइहाल्ने भएकोले हामीले थकथकी हुँदै लगाइदिएको लाहाछाप थियो । त्यसरी हाम्रो जमघटको चेपोमा च्यापिएर कठै उदयपुर 'अस्तपुर'मा चर्चित बन्थ्यो र क्षणमै गुमनाम छोडिन्थ्यो ।
यसपाली जिल्ला जाँदा पहिलेको त्यही उखान मनभरि हल्लियो । उदयपुर-अस्तपुर । जमघटमा लहरिने ती साथीहरू त भेटिएनन् तर उदयपुर उही थियो, मेरो आँखाभरि चढेको । यसलाई फुर्सदले नियालेँ, भर्खर नुहाएर ताजा बनेकी नवयुवतीले लयालु केशराशि एक-एक मुसारेझैँ । तब निचोड निकालेँ- साँच्चै, उदयपुर अस्ताएको रहेनछ । झलक्क एक झमट हेर्दा मात्र घामको बाफ फेला परेको रहेछ । यसको पिँधमा पो रहेछ- भुलभुलाएको भुतभुते तातो र सिनिक्क उज्यालो । यसपालीको डेढमहिने जिल्ला बसाइका क्रममा धेरै कुरा हावाजत्तिकै छोइने रुपमा मनन गरेँ, नि:श्‍वास होइन सन्तोषको फोहोरा छुट्यो ।
उदयपुरवासीले आफ्नै हातामा एफएम रेडियो पाएका छन्, अर्को स्टेशन शीघ्र सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ । त्यसले पनि सूचनाको ससानो क्रान्तिबाट सभ्यतामा आयाम थप्दै जाने आशा गरौँ । अफसेट प्रेसको सहज उपलब्धताले पत्रपत्रिका प्रकाशनको फड्कोसँगै सङ्ख्यात्मक वृद्धि चुलिँदो छ । खासगरी साप्ताहिक खबरपत्रिका । लेख्‍नेहरू लेखिरहेका छन् । बकुल्लाको हूलमा काग जुनसुकै क्षेत्रको टर्रो यथार्थ हो, साहित्यमा पनि यस्तो अवस्था छ । झन् भर्खरजसो साहित्यिक चालचुलको सामुहिक बाटो समाएको उदयपुरजस्तो ठाउँमा साहित्यको आवरणमा आफ्नो गोरखधन्दा सपार्ने खेती हुनु अस्वाभाविक नहोला । त्यस्ताहरू समयसँगै अवश्य पाखा लाग्नेछन् र भूमिका रच्नेहरूले न्यायपूर्ण स्थान पाउनेछन् ।
यहाँ माटो राम्रो छ, मुख्यबाली धान उधुमले फल्छ । पछिल्लो समयमा तरकारी खेतीमार्फत जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा गाउँघरमा होडै चलेको पाइन्छ । उत्पादित तरकारी स्थानीय बजारमा विक्री गर्न पाउँदा गाउँलेहरू दङ्ग छन् । मुलुकभरमै गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने रूपमा चिनिएको सिमेन्ट कारखाना उदयपुरमै छ । त्यसकै अनुग्रहबाट कल्पेभन्दा द्रुत समयमा सदरमुकामसम्म पक्की सडकको विस्तार र गाउँघर छिचोल्दै पहाडी भित्ताको चुनढुङ्गा खानीसम्म पुग्ने ग्राभेल सडक पाएको भूमिले केही भागलाई छाडेर नगरपालिका हुने सौभाग्य पनि पाइसकेको छ । थप सडक निर्माण, सुधार र विस्तारको कार्य भइरहेको छ ।
तर, सहरी भेगमा प्रतिलिटर ३४-३५ रूपियाँ पुगिसकेको गाई-भैंसीको दूधको मूल्य जहाँ अझै पनि किसानले प्रतिलिटर २०-२२ रूपियाँभन्दा बढी पाउन सकेका छैनन् । तैपनि गाउँलेहरू काइ परेका डब्बा-डब्बीमा दूध भरेर 'उपायनास्ती' भन्ने भावमा एकाबिहानै लुखुरलुखुर चौकको डेरी सेन्टर धाइरहेछन् । मानौँ गाउँलेहरू सोच्दा हुन्- 'हे डेरीवाल हाम्रो ठाउँमा दूध बटुल्न बसेर ठूलो पुन्य गरेका छौ बाबै !' र भित्रभित्रै कृतकृत्य हुँदा हुन् । तर डेरीवाल गाउँले वा आफ्नो फाइदाको लागि दूध सङ्कलन गर्न बसेको छ ? कसको लागि दिनदिनै गाडीमा २०-२५ किलोमिटर धाएर दूध ओसार्ने गर्छ, भन्नु परोइन ।
यिनै आशा-भरोसाका प्रसङ्गसँगै CaFe को भित्तामा उतै जिल्लाबाट ल्याएको चित्र-चर्चाको पोको फुकाउँछु । यी तस्बिरहरू मेरो सुखी मनले छाम्नभ्याएका उदयपुरे रङ हुन् । यिनलाई आँखीझ्यालको बहाना बनाएर म भोलिको साँच्चिकै उदयपुरको उज्यालो संसार हेर्न खोज्दैछु । सुन्नू है, अस्ताएको छैन है उदयपुर !
मगमगिँदो भोक : रसिलो पर्खाइमा अम्बाको झुन्ड
मेरो सेरोफेरो, उपत्यका घेरो
प्रेमभित्रको गुलियो प्रसाद
नेपाली सुन खिइएला है आफैँबाट !
साना मानिस, सानै हतार र हाटबजार
काली हुँ या गोरी, गाउँकी म छोरी
पुग्दा सोचको खानीसम्म : चुनढुङ्गा ओसार्ने घिर्लिङ र स्थानीय चौक
नोभेम्बर, २००८ © जोतारे धाईबा
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, November 13, 20084: Comments
शब्दका खेलाडीहरूलाई, अक्षरका प्रेमीहरूलाई शुकदेव नेपाल नामको अस्तित्वसँग कुनै परवाह नहुन सक्छ । ५३ वर्षघिको जन्मसमयमा (सम्वत् २०१२ असार १८) शुकदेवकी आमाले त्यो प्रसव पीडाबाट झट्ट छुट्टी लिएर सायदै सोच्न भ्याइन् - छोराको कर्मयात्रा र गहुँगोरो भविष्य । तिनै शुकदेव समयक्रममा अग्निशिखाको पहिचानमा सिर्जनशील जीवनको इतिहास कोर्दै देखापरे । जीवनमा देखापर्नुजत्तिकै स्वाभाविक डुङ्गामा अग्निशिखा जीवनको नदीबाट पारि तरे, दायाँ-बायाँ धारमा कृति र कीर्तिका छालहरू छचल्काएर छाड्दै ।
दसैँको टीका सम्झिँदै राजधानीबाट जिल्लातिर फाल हान्दै गर्दा काठमाडौँ खाल्डोबाट बाहिरिने गल्छीमा थामिएको बसले अखबार किन्नलाई फुच्चे हकर जुराइदिएको थियो । असोज ७ गते बिहानको कुरो । तब अखबार समाउनासाथै पहिलो पाताले नै टाउकोमा दसैँको टीकाभन्दा वजनदार टाँसो पोतिदियो । पढ्छु- हृदयाघातबाट अग्निशिखाको निधन । शिखा त अघिल्लो दिन बिहानै सांसारिक चोलाबाट बिदावारी भइसकेछन् । एउटा हृदयाघातले यता अर्को घात मलाई दियो । सती वयरको झ्याम्टाले पाखुराभरि कोतरेजस्तै पिरो भयो ।
हृदयाघातको बिरामी हुनु भनेको त्यस्तो हो, म कल्पना गर्छु, त्यो झट्कासरि झ्वाट्ट आउँछ, सायद पीडितलाई पनि पीडाको फुर्सदिलो हिसाब नहुनेगरी । कतिपयलाई हृदयाघातले धेरैपटक जिस्काइरहन्छ र पनि केही गर्दैन । धेरैजनालाई यसले पहिलो चुम्बनमै एकैचोटि कलकलाउँदो जीवनबाट चुँडेर लैजान्छ । अग्निशिखा नेपाली साहित्य र सञ्चार क्षेत्रका त्यस्तै एउटा फूल भएर झरे ।
अग्निशिखा मार्क्सवादी चिन्तनका पक्षधर । आज धेरै मान्छे पार्टीको छातामुनि ओतिएको आधारमा कम्युनिस्ट हुन्छन्, पार्टीले कम्युनिस्ट ! यस्तो लाग्छ, यो रोग छिपछिपे क्रान्तिकारिताको कीरा लागेका दूषित मनहरू अवस्थित हाम्रो जस्तो मुलुकको अब्बल विशेषता र धरातलीय यथार्थ हो । तर अग्निशिखा विचारले कम्युनिस्ट थिए, त्यही भएर बाँचे । मरणोपरान्त कुन पार्टीले उनको शवमा झन्डा ओढायो, यो विषय होइन । विषय हो, उनी कस्तो व्यक्तित्वको गुदी लिएर समाजको निरन्तरको कायापलट-दौडमा आफ्नो जिम्मेवारीमा कतिसम्म वेगिए ? यस मानेमा पुष्ट फलयुक्त पक्का छवि मेरा आकलनमा उनको रहृयो ।
२०६० चैत्रताका उनको पुस्तक आस्थापुञ्ज किनेको थिएँ, डिल्लीबजारको कुनै पुस्तक पसलबाट । मसँग भएको उनको त्यही मात्र एउटा किताब हो । जुन किताब उनले यसरी समर्पण गरेका छन् -
ती सबै कम्युनिस्टमा
जसले कम्युनिस्ट हुनुको गौरवलाई
आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लाइसेन्स बनाएनन् ।
समर्पणको ओज निकै गहन हुन्छ । यसको अर्थ आलाकाँचा ठिटा-ठिटीको 'म तिमीप्रति मन-मगजले पूरै समर्पित छु प्यारा/प्यारी !' भन्ने स्पस्टीकरण बोलमा हुन्न । समर्पण मनको बोलीबाट गरिन्छ, रगतमै गुन्जिएको हुन्छ । शिखाको उक्त हक्की मनबोलीबाटै थाहा हुन्छ उनी बिना लाइसेन्सका कम्युनिस्ट थिए । त्यसभन्दा पहिलो र प्रमुख कुरो, उनी मानिस नै भएर बाँचे ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विशेष दखल राख्ने शिखा पत्रकारितामा पनि त्यही ज्ञानलाई अस्त्र बनाएर चल्तापूर्जा पाठकप्रिय लेखक/स्तम्भकार रहे । पछिल्लो समयमा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा सहायक सम्पादकका रुपमा क्रियाशील उनी राजनीतिक पृष्ठभूमिमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी हस्तीहरूको गौरवशाली जीवन-इतिहास केलाउनमा बढ्ता रुचि राख्थे । उनका प्रायशः पुस्तक पनि तिनै शिखर व्यक्ति-व्यक्तित्वका जुझारु जीवनकथा समेटिएको रुपमा प्रकाशन भएको पाइन्छ ।
यो सबै मेरो बिलौना र चर्चा पनि अब यतिखेर मृत्युपछिको आराधना भइगयो । तर उनको जीवन छँदै पनि जब्बर प्रतिभा भनेर मनभरि राखेको कद हो- अग्निशिखा । बाब्बा ! कसरी लेख्न सकेका होलान् यतिविघ्न गहिरो विवरणको र कलात्मक बान्कीका लेखहरू !! त्यो पनि विदेशी अनुहारहरूका ! पढेर म चकित हुन्थँ ।
गत असोजको सुरुवाती दिनमा भएको सामुहिक जमघटमाझ नयाँ पत्रिकामा कार्यरत मेरा सहपाठी अर्जुन पौडेलसँग प्रसङ्गवश अग्निशिखाबारे कुरा उप्काएको थिएँ । जिज्ञासासूचक भावले उनलाई सोधेको थिएँ - 'अफिसमा के गर्छन् अग्निशिखा चाहिँ ?' त्यतिबेला शिखा जीवितै थिए, उनी त जीवनको आखिरी घडीसम्मै कलमसँग एकाकार रहने सौभाग्यशालीमध्येका रहे । मेरो जिज्ञासामा अर्जुन बोले-'अनुवाद गरी बस्छन् उनी, जहिल्यै उनको जुटाइ त्यस्तै हो ।'
उक्त दैनिकमा सुरुवातदेखि कार्यरत अधिकांश पत्रकारहरूले पत्रिका छाड्ने क्रममा तीव्रता आएको सन्दर्भमा कुरा हुँदा सबै राम्रा मान्छे पत्रिकाबाट बाहिरिइसके भन्ने प्रतिक्रिया मित्र अर्जुनले दिएका थिए । अनि हतारिएर मैले 'अग्निशिखा त छन् नि ?' भनेर सोध्दा 'छन्' भन्ने जवाफ मिल्यो । मनैमनमा एउटा राम्रा मान्छे त (पत्रिकामा) रहेछन् नि भन्ने लाग्यो । तब मैले सोधेको थिएँ- 'के गर्छन् अग्निशिखा चाहिँ ?'
नयाँ-नयाँ अखबार प्रकाशन हुने तर्खर हुँदै गर्दा र नेपाली छापा संसार दक्ष जनशक्तिको तानातानी गर्न हाटबजारमा परिणत हुँदा त्यसको प्रतिफलमा छनोटको विकल्पहरू पत्रकारहरूको लागि खुला भएका छन् पछिल्लो समयमा । वर्षौँदेखि पुराना पत्रिकाहरूमा रहेर खारिएका पत्रकारहरूको 'बार्गेनिङ पावर' ती नयाँ प्रकाशनको सामु एक्कासि बढेको छ । वहाल रहेको अड्डामा भन्दा राम्रो अवसर भएमा अन्यत्र जान जोकसैको मन हुन्छ । यस कुरामा, अरुको अधिकारको कुरालाई स्वर भर्ने पत्रकार चुक्ने कुरै छैन । तर राम्राभन्दा राम्रा अवसर भन्दैमा यता र उता घस्रिने डुलुवा रोग लाग्यो भने पत्रकारको पनि खैरात हुन्न होला ।
अन्त्यमा, ३९ हस्तीहरूको जीवनगाथा सँगालिएको शिखालिखित पुस्तक 'आस्थापुञ्ज' को भूमिकाबाट उनी कसरी रमझम दुनियाँबाट ज्ञानगुनको बौद्धिक फाँटमा कोल्टे फेरे भन्ने प्रसङ्ग उनकै शब्दमा यहाँ खुलाउँछु । अनर्थ लाग्दैन भने यहीँनेर भन्न मन लाग्यो, तलको कायापलट-कथा पढ्दा रत्‍नाकर डाकू वाल्मीकीमा परिणत भएको किस्सा याद आउँछ । कस्तो लाग्छ, आफैँ पढ्नोस् है त एकचोटि -
'कुनै जमाना थियो- मेरा कोठामा खातका खात हिन्दी फिल्मी पत्रिका हुन्थे । म, फिल्मी नायक-नायिकाकै गफमा जुट्थेँ । सपनामा पनि नायक-नायिका नै देख्थेँ । हेमा र जीनतसँग सपनामा कुरा हुन्थ्यो, सायरा र शर्मिलासँग सपनामै भेट हुन्थ्यो । म र मेरो मामा-चेलो हिमाञ्चल भट्टराईको रुमानी संसार यस्तै थियो ।
एकदिन त्यो संसारमा जबर्जस्त हस्तक्षेप । त्यो दिन जब म र हिमाञ्चल फिल्मफेयर पत्रिकाका सामग्रीमा डुबिरहेका थियौँ । कभरमा छापिएको जीनतको ग्ल्यामरस फोटोमा मग्न थियौँ । अचानक जेठा मामा कोठामा आउनुभयो । केही भन्नुभएन, मेरो हातबाट फिल्मफेयर थुत्‍नुभयो । र, झ्यालबाट बाहिर फ्याँक्नुभयो । बिना एक शब्द बोली कोठाबाट बाहिरिनुभयो । म र हिमाञ्चल स्तब्ध भयौँ । हाम्रो रुमानी संसार चकनाचुर भयो ।
म मामासँग रिसाइनँ । मेरा आँखा खुले । कोठाबाट फिल्मी पत्रिका हटाएँ । फिल्म हेर्न छाडेँ । हिरो-हिरोइनका गफ पनि छुटे । कोठामा भित्रिन थाले प्रगतिशील साहित्यका पुस्तकहरू । गोर्की र लु शुन, प्रेम चन्द र हवार्ड फास्टका रचनामा हामी डुब्न थाल्यौँ । अर्थात्, अब सुरु भयो यात्रा हिमाञ्चलसँगै आस्थापुञ्जको आकाशतर्फको....।
नोभेम्बर ५, २००८ / © जोतारे धाईबा
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, November 09, 20082: Comments